ဘယ်လောက် စားစား သွယ် လျသော ခန္ဓာ ကိုယ်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင် တယ် လို့ ဆုတောင်း လိုက် တဲ့ ပိုပို – GaMone Media
ဘယ်လောက် စားစား သွယ် လျသော ခန္ဓာ ကိုယ်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင် တယ် လို့ ဆုတောင်း လိုက် တဲ့ ပိုပို
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဆိုတော်မလေးပိုပိုကတော့ အဆိုပိုင်း မှာလည်း ကျွမ်းကျင်သလို ဘာသာရေးကိုလည်း အလေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ဆွမ်းလောင်းလှူဖြစ်တဲ့အလှူလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ ကိုမျှဝေပေးလေ့ရှိသူပါ။ အခုလည်း ဆွမ်းလောင်းဖြစ်တဲ့အလှူလေး ကိုပရိသတ်ကိုမျှဝေ ရင်း ဆုတောင်း လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ယနေ့ ငါးကြင်းနဲ့ မျှစ်ချဉ် ဂေါ်ဖီကြော် ငါးချဉ်သုတ် ဆန် ၂ လုံးနီးပါး ချက်လှူပါတယ်ရှင့်…. ဒါန ပြီးတော့ ငါးပါးသီလ ဆောက်တည်ပါမယ်…. ယနေ့ပြုရ ကုသလ ကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများပြီး ဘေးရန် အသွယ်သွယ်တို့မှ ကင်းဝေးပါရစေဘုရား… သူတော်ကောင်းများနဲ့ သာတွေ့ဆုံ၍ စိတ်ချမ်းသာရပါစေဘုရား နောက်ဆုံး ဆုတောင်းကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ စားစား သွယ်လျသော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရစေဘုရား” ဆိုပြီးတော့ အလှူဒါနပြုတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားထားတာပါ။
ပိုပိုကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံအရ သွယ်သွယ် လျလျလေးမဖြစ်တာကြောင့် သွယ်လျတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူပါ။ အခုလည်း သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းနေတာပါတဲ့နော်…
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အဆိုေတာ္မေလးပိုပိုကေတာ့ အဆိုပိုင္း မွာလည္း ကြၽမ္းက်င္သလို ဘာသာေရးကိုလည္း အေလးထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို ဆြမ္းေလာင္းလႉျဖစ္တဲ့အလႉေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြ ကိုမွ်ေဝေပးေလ့ရွိသူပါ။ အခုလည္း ဆြမ္းေလာင္းျဖစ္တဲ့အလႉေလး ကိုပရိသတ္ကိုမွ်ေဝ ရင္း ဆုေတာင္း လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္မွာ “ယေန႔ ငါးၾကင္းနဲ႔ မွ်စ္ခ်ဥ္ ေဂၚဖီေၾကာ္ ငါးခ်ဥ္သုတ္ ဆန္ ၂ လုံးနီးပါး ခ်က္လႉပါတယ္ရွင့္…. ဒါန ၿပီးေတာ့ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ပါမယ္…. ယေန႔ျပဳရ ကုသလ ေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားၿပီး ေဘးရန္ အသြယ္သြယ္တို႔မွ ကင္းေဝးပါရေစဘုရား… သူေတာ္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ သာေတြ႕ဆုံ၍ စိတ္ခ်မ္းသာရပါေစဘုရား ေနာက္ဆုံး ဆုေတာင္းကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ စားစား သြယ္လ်ေသာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါရေစဘုရား” ဆိုၿပီးေတာ့ အလႉဒါနျပဳတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ေရးသားထားတာပါ။
ပိုပိုကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပုံအရ သြယ္သြယ္ လ်လ်ေလးမျဖစ္တာေၾကာင့္ သြယ္လ်တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူပါ။ အခုလည္း သြယ္လ်တဲ့ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ပါေစဆိုၿပီး ဆုေတာင္းေနတာပါတဲ့ေနာ္…
Previous post ပင်ကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ တွေ ကို အထင်းသား ပေါ် လွင်စေ တဲ့ ရွှေအိမ်စည် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
Next post အမိုက်စား ဖက်ရှင် ဝတ်စုံ လေး နဲ့ လှရက် လွန်းနေ တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး ရဲ့ ပုံရိပ် များ